ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုတစ်ခုကအမှန်တကယ်ဦးနှောက်စွဲဖြစ်လာနိုင်သလား? (2011) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
မှတ်ချက်များ - ဤသည်ဒေါက်တာဟီလ်တန်၏ပုံမှန်ပုံစံဖြစ်သည် ညစ်ညမ်းစွဲ: တစ်ဦးကအာရုံကြောသိပ္ပံအမြင် (2011), ဒီတူညီတဲ့အပိုင်းများတွင်တွေ့ရှိရပါသည်။ ငါတို့အဖြစ်ကိုသူကသဘာဝဆုလာဘ်စွဲလမ်းဖြစ်နှင့်မူးယစ်ဆေးကဲ့သို့တူညီသောဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကို, ယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအနောက်ဆုံးပေါ် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူဖြစ်ပါသည် အပြာစာပေစွဲ - စွဲခြင်း - neuroplasticity ၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် supranormal stimulus | ဟီလ်တန် | လူမှုဗေဒအာရုံကြောသိပ္ပံ & စိတ်ပညာ (2013) ။
ဇန်နဝါရီလ 20, 2011
Donald L. ဟီလ်တန်, ဂျူနီယာ MD, FACS
San Antonio တွင်မှာတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံစင်တာတက္ကသိုလ်
လူ့ ဦး နှောက်သည်ရှင်သန်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောအပြုအမူများကိုမက်လုံးပေးရန်အစီအစဉ်ရှိသည်။ Mesolimbic dopaminergic system သည်အစာစားခြင်းနှင့်လိင်ကိုပျော်မွေ့ရန်အားကောင်းသောအားပေးသည်။ ကိုကာကိုလာ၊ ဘိန်း၊ အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ဤအပျော်အပါးစနစ်များကိုဖြိုခွဲဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီး ဦး နှောက်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးမြင့်မားစွာရှင်သန်ရန်လိုအပ်သည်ဟုယူမှတ်စေသည်။ အစားအစာနှင့်လိင်ကဲ့သို့သောသဘာဝဆုကျေးဇူးများသည်ဆေးဝါးများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နည်းတူဆုလာဘ်စနစ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အတွက်ယခုအခါ 'သဘာဝစွဲလမ်းမှု' ကိုစိတ် ၀ င်စားကြောင်းသက်သေပြနေသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုများသည် homeostasis အခြေအနေကိုရပ်တန့်စေပြီးဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခါကိုကင်း၊ အစားအစာနှင့်လိင်အပေါ်စွဲလမ်းမှုဖြစ်ပေါ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အစာစားခြင်းကများသောအားဖြင့်အဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ အလားတူစွာ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လူတစ် ဦး ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမှုတိုးတက်စေရန်စွမ်းရည်ကိုပျက်ပြားစေသောအခါသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးသောအခါထိခိုက်စေနိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကသက်သေအထောက်အထားများသည်သဘာဝအပြုအမူများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏စွဲလမ်းမှုသဘောသဘာဝကိုညွှန်ပြခဲ့ပြီး ဦး နှောက်တွင် dopaminergic ဆုကိုခံစားစေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှစွဲလမ်းမှုသုတေသနဒါရိုက်တာ Dr. Howard Shaffer က ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်“ စွဲလမ်းမှုများစွာသည်အတွေ့အကြုံ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်အကြံပြုသောအခါကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ - မကြာခဏတွေ့ကြုံမှု။ ဒါပေမယ့် neuroadaptation - မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမရှိရင်တောင်မှအပြုအမူတွေကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေဖို့အာရုံကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။ ” သူကဒီဆောင်းပါးကိုပြောပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းလောင်းကစားလိုသဘာဝစွဲလမ်းမှုတွေရဲ့ ဦး နှောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသူပိုပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ ဒီအတူတူမှအောက်ပါသတိပြုပါ သိပ္ပံ 2001 ကနေစက္ကူ
အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူများကတစ်အလေ့အထထိုကဲ့သို့သောစားခြင်းနှင့်လိင်အဖြစ် survival- ကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်အပြုအမူဆုချမှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲကြောင်းဦးနှောက်ဆားကစ် "ပုန်းကွယ်တိုက်ခိုက်ခြင်း" သောအခါကြောင်းစွဲဖြစ်ပေါ်ပြောနေ၏ဝါသနာဖြစ်ကြသည်။ "သင်ဆေးဝါးဗေဒနှင့်အတူဤအ circuits များ derange နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့ရပ်တည်, သင်အရမ်းသဘာဝကဆုလာဘ်နှင့်အတူကလုပျနိုငျ," စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်စိတ်ပညာရှင်ဘရိုင်ယန် Knutson ကဤသို့။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများဒီကိစ္စကို၏စိတ်နှလုံးမှာမဟုတ်တော့ဖြစ်ကြသည်။ "ဘာဗဟို core ကိုပြဿနာအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းတက်လာမယ့်တာဖြစ်ပါတယ် ... ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်း Self-ဖျက်ဆီးအပြုအမူအတွက်ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်ပါတယ်" ဟု NIDA ၏စတီဗင် Grant ကပြောပါတယ်။
ဤတော်လှန်ရေးအယူအဆများကိုပထမဆုံးဖော်ပြပြီးသည့်နောက်ဆယ်စုနှစ်တွင်သဘာဝဆုလာဘ်စွဲစွဲလမ်းမှုအယူအဆသည်သာလျှင်အားဖြည့်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်ရှိသိနာတောင်ဆေးတက္ကသိုလ်မှအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်ဥက္ကchairman္ဌ Dr. Eric Nestler သည်မှတ်သားလောက်ဖွယ်စာတမ်းကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ “ စွဲလမ်းမှုအတွက်ကျင့်သုံးသောလမ်းကြောင်းရှိသလော” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆောင်းပါးသည် သူကဆက်လက်ပြောကြားသည် -“ တိုးတက်လာသောအထောက်အထားများအရ VTA-NAc လမ်းကြောင်းနှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြား limbic ဒေသများသည်အစားအစာ၊ လိင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကဲ့သို့သောသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများ၏ပြင်းထန်သောအပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလည်းအလားတူလုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ထိုဒေသများသည်ပင်သဘာဝစွဲလမ်းမှု (သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကိုမသင်မနေရစားသုံးမှု) ဟုခေါ်သည့်ရောဂါဗေဒအလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၊ ပဏာမတွေ့ရှိချက်များအရမျှဝေထားသောလမ်းကြောင်းများပါ ၀ င်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
2002 ခုနှစ်တွင်ကင်းစွဲအပေါ်တစ်ဦးလေ့လာမှုတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအပါအဝင်ဦးနှောက်အများအပြားဒေသများရှိတိုင်းတာအသံအတိုးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှု, သရုပ်ပြထားတဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက voxel-based morphometry (VBM) လို့ခေါ်တဲ့ MRI-based protocol ကိုအသုံးပြုဖို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ ဦး နှောက်ရဲ့မီလီမီတာတစ်ဗူးကိုအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ထားတယ်။ နောက်ထပ် VBM လေ့လာမှုကို ၂၀၀၄ တွင်အလွန်အလားတူတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူမက်သာအဖက်တမင်းအကြောင်းထုတ်ဝေခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေစဉ်တွင်ဤတွေ့ရှိချက်သည်ဤဖြစ်ကြသည်သကဲ့သို့, သိပ္ပံပညာရှင်, သို့မဟုတ် layperson ဖြစ်စေရန်အံ့သြစရာမဟုတ် "စစ်မှန်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ "
အဝလွန်ခြင်းသို့ ဦး တည်ခြင်းအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကဲ့သို့သောသဘာဝစွဲလမ်းမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်သောအခါဇာတ်လမ်းသည် ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် VBM လေ့လာမှုကိုအဝလွန်ခြင်းကိုအထူးကြည့်ပြီးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးရလဒ်များမှာကိုကင်းနှင့်မက်သာဖီတမင်းအမ်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ အဝလွန်ခြင်းလေ့လာမှုကအသံအနိမ့်အမြင့်များ၊ ဒီလေ့လာမှုကသဘာဝ endogenous စွဲတွင်မြင်နိုင်ပျက်စီးမှုကိုသရုပ်ပြအတွက်သိသိသာသာဖြစ်သော်လည်းတစ် exogenous မူးယစ်ဆေးစွဲဆန့်ကျင်သည်အတိုင်း, ငါတို့လုပ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအလိုလိုလက်ခံဖို့ပိုမိုလွယ်ကူနေဆဲ မြင် အဆိုပါအဝလွန်သူတစ်ဦးအတွက် overeating ၏ဆိုးကျိုးများ။
ဒါဆိုလိင်စွဲလမ်းမှုကော။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ဂျာမနီမှ VBM လေ့လာမှုသည် pedophilia ကိုအထူးလေ့လာခဲ့ပြီးကိုကင်း၊ မက်သာဖီတမင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းလေ့လာမှုများနှင့်တူညီသောတွေ့ရှိချက်ကိုပြသခဲ့သည်။ ဤဆွေးနွေးမှုနှင့် ဆက်စပ်၍ ဤလေ့လာမှု၏အရေးပါမှုသည်လိင်နှင့်မသက်ဆိုင်သောကြောင့် ဦး နှောက်အတွင်းရှိခန္ဓာဗေဒ၊ ခန္ဓာဗေဒပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောစာတမ်းသည် pedophilic ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ကလေးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြုမှုများအကြားဆက်စပ်မှုမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤစာတမ်းသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲခြင်းနှင့်အခြားပြproblemsနာများအကြားအဖွဲ့ခွဲတစ်ခုအပေါ်တွင်သာအာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအကြားကျင့် ၀ တ်နှင့်ဥပဒေရေးရာကွဲပြားခြားနားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်း ဦး နှောက်သည် dopaminergic လျှော့ချခြင်းနှင့်စွဲခြင်းအပေါ်အခြေခံသည့်အသံအတိုးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင်သောသတ်မှတ်ချက်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုသူသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုခံစားနေရမှုရှိမရှိ ဦး နှောက်ကဂရုစိုက်ပါသလား။ ဦး နှောက်၏မှန်စနစ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏လက်တွေ့အတွေ့အကြုံကို ဦး နှောက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအတွေ့အကြုံအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်နေသောယောက်ျားများရှိလူ၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိအာရုံခံဆဲလ်များနှင့်ဆက်စပ်သည့်နေရာများကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုအားပြသခဲ့သည်။ စာရေးသူကနိဂုံးချုပ်သည်မှာ ... မှန်အားဖြင့်အာရုံခံဆဲလ်စနစ်သည်လေ့လာသူများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပုံရိပ်များကိုဖော်ထုတ်သည့်အခြားသူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးမှုအခြေအနေကိုတုံ့ပြန်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟုကောက်ချက်ချသည်။ တစ်ဦးကပဏာမလေ့လာမှုအထူးသမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းလူနာတိုကျရိုကျပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုထောက်ခံပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကအက်တွန်များ (သို့) အာရုံကြောဆဲလ်များကိုဆက်သွယ်ပေးသောဝါယာကြိုးများတည်ရှိရာအဖြူအမှုန်များမှတဆင့်အာရုံကြောများပို့လွှတ်မှု၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ပျံ့နှံ့သော MRI ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောတိုကျရိုကျဒေသတှငျကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။
ဦး နှောက်စွဲဖြစ်လာရန် "သင်ယူ" အဖြစ်အများအပြားလေ့လာမှုများ neurochemistry အတွက်ဇီဝြဖစ်ရောဂါဗေဒရောဂါဗေဒအပြောင်းအလဲများကိုသရုပ်ပြပါ။ ဒီစွဲလမ်းစေတဲ့ပြောင်းလဲမှုများကို dopamine ဆုပေးစနစ်မှာ ဦး နှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကဲ့သို့သော MRI၊ PET နှင့် SPECT စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဦး နှောက်ကစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုလေ့လာမှုကကိုကင်းစွဲလမ်းမှုမှာ dopamine ဇီဝြဖစ်စဉ်ပုံမှန်မဟုတ်တာကိုပြသဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုလည်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူဤအတူတူပျော်မွေ့စင်တာများ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပြသကွောငျးတှေ့မှအံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။ အဝလွန်ခြင်းမှဦးဆောင် Overeating နောက်ထပ်သဘာဝအစွဲလည်းအလားတူရောဂါဗေဒပြသထားတယ်။
ဒါ့အပြင်ဆိုင်တဲ့ naltrexone နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲတစ်ခု opioid အဲဒီ receptor ရန်၏ကုသမှုအပေါ် Mayo Clinic ဆေးခန်းကနေစက္ကူဖြစ်ပါတယ်။ DRs ။ Mayo Clinic ဆေးခန်းရဲ့ Bostsick နှင့် Bucci ကသူ၏အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူလူနာကုသ။
သူသည်နျူကလိယအတွင်းရှိဆဲလ်များကိုလှုံ့ဆော်ရန် dopamine ၏စွမ်းရည်ကိုလျှော့ချရန် opioid စနစ်ကိုလုပ်ဆောင်သည့် naltrexone ဆေးကိုတင်ခဲ့သည်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူသူသည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, စှဲလမျးသူရဲ့ PFC အတွက်ဆယ်လူလာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်မူးယစ်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများတိုးမြှင့် salience မှု, Non-မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆော်မှု၏ salience လျော့နည်းသွားနှင့်ရှင်သန်မှုမှဗဟိုရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလှုပ်ရှားမှုများလိုက်စားစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းသွားသည်။ အရက်ကုသမှုအတွက်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုကနေ naltrexone ရဲ့ခွင့်ပြုချက်အပြင်, အများအပြားထုတ်ဝေကိစ္စတွင်အစီရင်ခံစာများရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, Self-ဒဏ်ရာ, kleptomania နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကုသမှုအတွက်၎င်း၏အလားအလာသရုပ်ပြပါပြီ။ ကျနော်တို့ကဒီအင်တာနက်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲတိုက်ဖျက်ရန်ရန်၎င်း၏အသုံးပြုမှု၏ပထမဦးဆုံးဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်ယုံကြည်ပါတယ်။
လန်ဒန်၏ဂုဏ်သတင်း Royal Society ဟာ 1660 ရဲ့ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး running သိပ္ပံနည်းကျဂျာနယ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ၏လတ်တလောပြဿနာအတွက် Royal Society ၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးတွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစွဲလမ်းမှုသိပ္ပံပညာရှင်များကဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းစွဲလမ်းမှု၏နားလည်မှုအခြေအနေကိုတင်ပြခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးကိုတင်ပြသောဂျာနယ်ထုတ်စာစောင်၏ခေါင်းစဉ်မှာ“ စွဲလမ်းမှု၏ neurobiology - အသစ် vistas” ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာဆောင်းပါး ၁၇ ခုတွင်နှစ်ခုသည်သဘာဝစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအထူးဂရုစိုက်ခြင်းဖြစ်သည် မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ကျော်အတွက်ဦးနှောက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်တူညီအပေါ်ဒေါက်တာနိုရာ Volkow အားဖြင့်၎င်း, စက္ကူ။ DFosB နှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါက်တာ Nestler ရေးသားသောတတိယစာစောင်တွင်သဘာဝစွဲလမ်းမှု၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကိုဖော်ပြထားသည်။
DFosB သည်ဒေါက်တာ Nestler လေ့လာခဲ့သောဓာတုဗေဒဖြစ်ပြီးစွဲလမ်းနေသည့်ဘာသာရပ်များ၏အာရုံခံတွင်တွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ well သည်ကောင်းမွန်သော်လည်းဆေးစွဲခြင်းတွင်အလွန်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သည်မှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၌လေ့လာခဲ့သည့် ဦး နှောက်ဆဲလ်များ၌ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သဘာဝဆုလာဘ်၏။[ကျွန်မ] DFosB နှင့် Over-စားသုံးမှုနှစ်ခုကသဘာဝဆုလာဘ်, စားခြင်းနှင့်လိင်၏၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမကြာသေးမီကစက္ကူ, ကောက်ချက်ချ:
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ဒီမှာတင်ဆက်အလုပ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအပြင်, သဘာဝဆုလာဘ်ဟာ Nac အတွက် DFosB အဆင့်ဆင့်သွေးဆောင်သောသက်သေအထောက်အထားများကိုထောက်ပံ့ပေး ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်များ NAc အတွက် DFosB သော induction မူးယစ်ဆေးစွဲ၏သော့ချက်ရှုထောင့်ကိုသာဖျန်ဖြေခြင်းအလိုငှါဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်, ဒါပေမယ့်လည်း သဘာဝကဆုလာဘ်များ compulsive စားသုံးမှုပတျသကျလို့ခေါ်သည့်သဘာဝစှဲ၏ရှုထောင့်။
ဒေါက်တာ Nora Volkow သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု (NIDA) ၏အကြီးအကဲဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အထင်ရှားဆုံးစွဲလမ်းမှုသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူမသည်ဤဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုသဘာဝစွဲလမ်းမှု၏နားလည်သဘောပေါက်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး NIDA အမည်ကိုဆေးစွဲမှုရောဂါများဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျုကိုပြောင်းရန်ထောက်ခံခဲ့သည်။ ဂျာနယ် သိပ္ပံ အစီရင်ခံစာများ: "NIDA ဒါရိုက်တာ Nora Volkow လည်းသူမ၏အဖွဲ့အစည်းရဲ့နာမညျကိုပတ်ဝိုင်းသင့်ကြောင်းခံစားခဲ့ရထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းအဖြစ်စှဲ, လောင်းကစားများနှင့်အစားအစာ, NIDA အကြံပေး Glen Hanson ကပြောပါတယ်။ '' သူမသည် [ကျနော်တို့သငျ့သညျ] တပြင်လုံးကိုလယ်ပြင်ကိုကြည့်သော Message ပေးပို့ချင်ပါတယ်။ " (အလေးပေးထည့်သွင်း) ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်းအထောက်အထားများသည်သဘာဝအရအကျိုးကျေးဇူးများကိုစွဲလမ်းစေသောသဘာဝကိုခိုင်မြဲစွာထောက်ခံသည်။ ဒေါက်တာ Malenka နှင့် Kauer တို့ကစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ ဦး နှောက်ဆဲလ်များ၌ဖြစ်ပွားသောဓာတုပြောင်းလဲမှုယန္တရားအကြောင်းသူတို့၏မှတ်သားလောက်သောစာတမ်းတွင်“ စွဲလမ်းမှုသည်ရောဂါဗေဒ၊ အစွမ်းထက်။ သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ” ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် ဦး နှောက်ဆဲလ်များ၏ဤပြောင်းလဲမှုများကို“ ရေရှည်စွမ်းရည်” နှင့်“ ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ” ဟုခေါ်ပြီး ဦး နှောက်ကိုပလတ်စတစ်ဟုခေါ်ဆိုခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခြင်းဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ ကိုလံဘီယာမှအာရုံကြောပါရဂူဒေါက်တာနော်မန်ဒိုဂျစ်သည်သူ၏စာအုပ်တွင် ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာဆားကစ်များပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုဖော်ပြသည်။ သူသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေသူအမျိုးသားများနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုတစ်ခုကိုမှတ်ချက်ပြုသည်။ သူတို့ကစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သော Skinner သေတ္တာများ၌ကိုကင်းကိုလက်ခံရန်ကြွက်များကဲ့သို့ကြွက်များကဲ့သို့“ မညီမျှစွာ” ကြည့်ကြသည်။ စွဲသောကြွက်များနည်းတူသူတို့သည်ကြွက်ကိုတွန်းလိုက်သကဲ့သို့ကြွက်ကို နှိပ်၍ နောက်ထပ်ပြင်ဆင်မှုကိုအလွန်အမင်းကြိုးစားနေကြသည်။ အပြာစာပေစွဲသည် လွန်မိပြီ သင်ယူခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုးဖြင့်ရုန်းကန်နေရသောသူများသည်၎င်းတို့အားကျော်လွှားရန်အခက်ခဲဆုံးစွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်ဟုသတင်းပို့ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုသည်အားကောင်းသော်လည်း“ စဉ်းစားတွေးခေါ်သည့်” နည်းလမ်းများတွင်ပိုမို passive ဖြစ်သော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာအားဖြင့် ပို၍ တက်ကြွသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ စွမ်းရည်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ထုတ်လုပ်ထားသည့်ပုံရိပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုစီအားစဉ်ဆက်မပြတ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းသည်အာရုံခံလေ့လာမှုနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းတို့တွင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထွတ်အထိပ်တစ်ဦးဘိန်းဖြူအလုအယက်စဉ်အတွင်းအသုံးချသူတို့အားကဲ့သို့တူညီသောဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအသုံးချ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ ဦး နှောက်ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ အာရုံကြောနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကိုပြန်လည်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲနိုင်စွမ်း၏အကျိုးဆက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နားမလည်ပါကဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောရောဂါကိုကုသရာတွင် ဆက်၍ ကျရှုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအစွမ်းထက်သောသဘာဝဆုကျေးဇူးကိုသင့်လျော်စွာပေးအပ်ပါကသင့်လျော်သောအာရုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုယခုစွဲလမ်းမှုနှင့်စိတ်ပျက်အားငယ်နေသူများစွာတို့အားငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်မျှော်လင့်ချက်ကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
 Constance Holden, "အပြုအမူစွဲ: သူတို့ကတည်သလား? သိပ္ပံ, 294 (5544)2နိုဝင်ဘာလ 2001, 980 ။
 အဲရစ်ဂျေ Nestler "စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား?" သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ 9(11):1445-9, Nov 2005
 ထရေဇာ R. Franklin, ပေါလုဃ Acton ယောသပ်သည်တစ်ဦးက Maldjian, Jason ဃ Grey က, Jason R. Croft, ချားလ်စ်အေ Dackis, ချားလ်စ် P. O 'Brien နှင့်အန်နာနှင်းဆီ Childress "ဟုအဆိုပါနောက်ကျနေခဲ့သည်အတွက် gray matter အာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းသွား, Orbitofrontal, Cingulate နှင့်ကင်းလူနာများ၏ယာယီ cortical, " ဟားဗတ် (51)2ဇန်နဝါရီလ 15, 2002, 134-142 ။
 ရှင်ပေါလုအမ် Thompson က, Kikralee အမ် Hayashi, Sara အယ်လ်ရှိမုန်ဂျနီဖာအေ Geaga မိုက်ကယ်အက်စ်ဟောင်ကောင်, Yihong Sui ကို, ဂျက်စီကာ Y. Lee က, အာသာဒဗလျူ Toga, ဝေါလ်တာလိန်းနှင့် Edythe ဃလန်ဒန်, "ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံမှန်မဟုတ်သော "သမ်ဖက်တမင်းသုံးပါကိုအဘယ်သူလူ့ဘာသာရပ်များ၏ဦးနှောက်အတွက်, အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်, 24 (26) ဇွန်လ 30 2004; 6028-6036 ။
 Nicola Pannacciulli, အန်ဂျလို Del Parigi, Kewei Chen ကဒီဇင်ဘာသားတော်ကို NT သည် Le အဲရစ်အမ် Reiman နှင့် Pietro အေ Tataranni, "လူ့အဝလွန်ခြင်းအတွက်ဦးနှောက်မူမမှန်။ တစ်ဦးက voxel-based morphometry လေ့လာမှု" Neuroimage 31 (4) ဇူလိုင်လ 15 2006, 1419-1425 ။
 Boris Schiffer, သောမတ်စ် Peschel, သောမတ်စ်ပေါလုသည် Elke Gizewshi မိုက်ကယ် Forshing, Norbert Leygraf, Manfred Schedlowske နှင့် Tillmann HC Krueger "Pedophilia အတွက် Frontostriatal စနစ်နှင့် Cerebellum အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးနှောက်မူမမှန်," စိတ်ရောဂါသုတေသနဂျာနယ် (41) 9, နိုဝင်ဘာလ 2007, 754-762 ။
 အမ် Bourke, အေဟာနန်ဒက်ဇ်, အဆိုပါ '' Butner လေ့လာမှု '' Redux: ကလေးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကျူးလွန်သူများအားဖြင့်လက်ကမ်းကလေးသားကောင်များ၏အဖြစ်အပျက်၏အစီရင်ခံစာ။ မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုဂျာနယ် 24(3) 2009, 183-191.
 အိပ်ချ် Mouras, အက်စ် Stole4ru, V. Moulier, M က Pelegrini-Issac, R. Rouxel, B, Grandjean, ဃ Glutron, ဂျေ Bittoun, ခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအားဖြင့်မှန်-အာရုံခံဆဲလျစနစ်၏ Activation သွေးဆောင်စိုက်ထူ၏ဒီဂရီခန့်မှန်းထားသည်: တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု ။ NeuroImage 42 (2008) 1142-1150 ။
 မိုက်ကယ်အိပ်ချ် Miner, နန်စီရေမွန်, BryonA ။ Meuller မာတင်လွိုက်, Kelvin ol Lim က "အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထကြွလွယ်သောနှင့် neuroanatomical ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ " စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန Neuroimaging Volum 174, Issue 2, November 30, 2009, စာမျက်နှာ 146-151 ။
 ဘရုစ်အီး Wexler, ခရစ္စတိုဖာအိပ်ချ် Gottschalk ရောဘတ် K. Fulbright, Isak Prohovnik, Cheryl အမ် Lacadie, ဘရုစ်ဂျေ Rounsaville, ယောဟန် C. ဂိုး, "ကင်းတဏှာ၏ Functional Magnetic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging," စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 158, 2001, 86-95 ။
 ဇန်နဝါရီ Reuters, သောမတ်စ် Raedler မိုက်ကယ်နှင်းဆီ, Iver လက်ဇန်နဝါရီ Glascher နှင့်ခရစ်ယာန် Buchel, "ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, အ mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏လျှော့ချ activation ဆက်စပ်နေသည်" သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ 8 ဇန်နဝါရီလ 2005, 147-148 ။
 မျိုးဗီဇ-ဂျက်ဝမ်, Nora ဃ Volkow, ဂျင်း Logan, နောမိ R. Pappas, ခရစ္စတိုဖာတီ Wong က, ဝေ Zhu, Noelwah Netusil, ဟန္န S ကမုဆိုး, "ဦးနှောက် dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း," ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 357 (9253) ဖေဖော်ဝါရီလ32001, 354-357 ။
 ဂျေမိုက်ကယ် Bostwick နှင့်ဂျက်ဖရီအေ Bucci "Naltrexone နဲ့ကုသအင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်း။ " Mayo Clinic ဆေးခန်းတရားစွဲဆိုထား, 2008, 83(2):226-230.
 မာ့ခ် N. Potenza, "ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း၏ neurobiology: ခြုံငုံသုံးသပ်နှင့်အသစ်တွေ့ရှိချက်များ" Royal Society ၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်, 363, 2008, 3181-3190 ..
 Nora ဃ Volkow, Gene-ဂျက်ဝမ်, ဟန္နအက်စ်မုဆိုး, ဖရန့် Telang "စွဲလမ်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက်အာရုံခံဆားကစ်ထပ်: စနစ်များကိုရောဂါဗေဒ၏သက်သေသာဓက," Royal Society ၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်, 363, 2008, 3191-3200 ။
 အဲရစ်ဂျေ Nestler "စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ," Royal Society ၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်, 363, 2008, 3245-3256 ။
 DL Wallace, et al, သဘာဝဆုလာဘ်-Related အပြုအမူအပေါ်နျူကလိယ Accumberns အတွက် DFosB ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု,အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်, 28 (4): အောက်တိုဘာလ 8, 2008, 10272-10277,
 သိပ္ပံ6ဇူလိုင်လ 2007: Vol ။ 317 ။ အဘယ်သူမျှမ။ 5834, p ။ 23
 ဂျူလီအေ Kauer ရောဘတ် C. Malenka, "လို့ Synaptic ပလပ်စတစ်နှင့်စွဲ," သဘာဝတရား, အာရုံကြောသိပ္ပံ Reviews 8, 8440858 နိုဝင်ဘာလ 2007, 844-858 ။
 Gert Holstege, Janniko R. Georgiadis, အန်း MJ Paans, လင်ဒါ C. Meiners, ဖာဒီနန် HCE ဗန် der Graaf နှင့် AAT ဆီမှ Reinders, "ဦးနှောက်ကို Activation လူ့အထီးသုတ်ရည်လွှတ်နေစဉ်အတွင်း," အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ် 23 (27), 2003, 9185-9193